Umbukiso Wezithombe ZaseWarwick (May – August 2015) | JW.ORG
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Igbo Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBhunu IsiCatalan IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiHausa IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalay IsiMalayalam IsiNahuatl (Saphakathi Nezwe) IsiNdebele (SaseZimbabwe) IsiNepali IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPersia IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTarascan IsiTelugu IsiThai IsiTurkey IsiValencia IsiYoruba IsiZulu
Kulo mbukiso wezithombe, bona intuthuko yomsebenzi wasendlunkulu entsha yoFakazi BakaJehova nendlela amavolontiya awusekele ngayo umsebenzi wokwakha phakathi kuka-May no-August 2015.
Umdwebo wendawo yaseWarwick lapho isiphothuliwe.
Amahhovisi/ISakhiwo Sezinkonzo Zomkhaya
May 6, 2015—Esakhiweni SaseWarwick
Kulungiselelwa ukufaka isisefo kuyiSterling Forest Lake (Blue Lake). Sizovimbela udoti omkhulu ukuba ungangeni emapayipini angaphansi kwechibi.
May 6, 2015—ESakhiweni Samashabhu/Sendawo Yokupaka Yomkhaya
Kuthelwa ukhonkolo ngesibhamu sakhona othangweni lophandla lweSakhiwo Samashabhu. Ukuthelwa kwawo ngale ndlela kuyashesha kunezindlela ezivamile.
May 15, 2015—ESakhiweni SaseWarwick
Umthwebuli oseMnyangweni Wezamafayela uthatha izithombe zomsebenzi wokwakha. INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ibuka izithombe isonto ngalinye ukuze ibone intuthuko yalo msebenzi.
May 30, 2015—ESakhiweni SaseTuxedo
Amavolontiya amabili avela eNingizimu YeCalifornia ayafika ezosebenza eMnyangweni Wamapayipi Amanzi. Aphakathi kwamakhulu amavolontiya afika ngalolo suku eTuxedo, eyindawo enjengesiteshi somsebenzi oya eWarwick. Ngo-August 1, kwafika inani eliphakeme kunawo wonke lezisebenzi ezintsha ezingu-707 zize kulo msebenzi.
June 9, 2015—ESakhiweni Sokuhlala B
Inkontileka isebenzisa i-crane ukuze zifake ingxenye yodonga endaweni yayo. Kwagcinwa ngeSakhiwo Sokuhlala B ukufaka izindonga namafasitela ezakhiweni zokuhlala.
June 16, 2015—EZakhiweni Zokuhlala C no-D
Inkontileka ifaka ibhuloho elihlanganisa iZakhiwo Zokuhlala C no-D.
June 25, 2015—ESakhiweni Sokuhlala C
Abalungisa igceke bafaka utshani bohlobo lwesinandi ngasentshonalanga yesakhiwo.
July 2, 2015—ESakhiweni SaseWarwick
Kulungiswa umsele oyinhloko idamu elingachithekela kuwo. Owokuqala wawakhiwe ngawo-1950. Ulungiswa ngenxa yezikhukhula nezimvula esezinkudlwana ukuze kuvikeleke isakhiwo saseWarwick nezindawo ezingomakhelwane ukuba zingonakaliswa yizikhukhula.
July 15, 2015—ESakhiweni Sokuhlala A
Ukuze kuncishiswe ukuminyana esakhiweni, imisebenzi eyenziwa ngaphakathi, njengokupenda nokumbozwa kwamapayipi, yenziwa kuze kube sebusuku. Lapho kusasetshenzwa neshifu yesibili, amakhulu ezisebenzi abelwa ukuba asebenze kusukela ngo-3:00 ntambama kuze kube u-2:00 ekuseni.
July 20, 2015—ESakhiweni Sokuhlala D
Osebenza ngokushisisa nokupholisa isakhiwo uqeqesha isisebenzi esisha ekumbozeni amapayipi.
July 21, 2015—ESakhiweni Sokuhlala B
Kupendwa ibhuloho elihlanganisa iSakhiwo Sokuhlala B neSakhiwo Samashabhu.
July 27, 2015—ESakhiweni SaseTuxedo
Endaweni yokupaka engemuva, iqembu lezisebenzi lilindele izinto zokuhamba eziya eWarwick. Izisebenzi zilethwa futhi zihanjiswe ngamabhasi esakhiweni.
Izisebenzi ezintathu zaseWarwick ziyagundwa. Isonto ngalinye, kugundwa izisebenzi ezingaphezu kuka-400 eTuxedo, eWarwick nasendaweni yokugcina izimpahla eMontgomery.
August 3, 2015—ESakhiweni SaseWarwick
Kufakwa amafolomu okuthela ukhonkolo ezindaweni ezizosetshenziselwa ukulawula ukushisa nokubanda. Le ndlela esebenzisa imigodi engu-120 engamamitha angaba ngu-150 ukujula, izofudumeza ebusika ipholise ehlobo. Ukusebenzisa amandla avela ngaphansi komhlaba kuzonciphisa izindleko futhi konge imvelo.
August 7, 2015—EMontgomery, eNew York
Kwamukelwa izimpahla ezivela kubathengisi bese zihlanganiselwa imisebenzi ethile yasesakhiweni saseWarwick.
August 14, 2015—ETuxedo Park, eNew York
Izisebenzi ezimbili zaseWarwick (owesibili nowesithathu ukusuka kwesokudla) zidla nomndeni osendaweni. Kunemindeni eminingana yoFakazi BakaJehova, njengalona, evule imizi yayo yamukela amavolontiya akulesi sakhiwo.
August 17, 2015—ESakhiweni Samashabhu/Sendawo Yokupaka Yomkhaya
Isisebenzi sihlola ukuphakama kwendawo.
August 20, 2015—Emahhovisi/ESakhiweni Sezinkonzo Zomkhaya
Ukufakwa kwamafasitela sekuphelile endaweni eyinhloko yokwamukela izivakashi ezizobuka indawo.
August 26, 2015—ESakhiweni SaseWarwick
Phakathi kukaMay no-August, kwaqedwa izingxenye zezindonga nophahla eSakhiweni Sokuhlala B, esiyisakhiwo sokuhlala sokugcina. Kwase kufakwe wonke amabhuloho abahamba ngezinyawo, kwaqalwa ngomsebenzi wokulungisa igceke ezindaweni ezihlukahlukene.